စည်သူလွင် | Myanmar Mp3 Album | Page 3
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / စည်သူလွင်
Category Archives: စည်သူလွင်
ဆောင်းဦးလှိုင်၊စည်သူလွင်၊အေးချမ်းမေ၊ဘရိတ်ကီ တို့သီဆိုထားတဲ့ Version အဟောင်းလေးပါ။ Download Mediafire iFile
October 13, 2009 the sun ဘရိတ်ကီ အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) စည်သူလွင် အေးချမ်းမေ ဆောင်းဦးလှိုင် Myanmar Artist3Comments
ရဲသွင် ဘိုဘို စည်သူလွင် – အချစ်ငှက်
၁။ Track ၂။ Track ၃။ Track ၄။ Track ၅။ Track ၆။ Track ၇။ Track ၈။ Track ၉။ Track ၁၀။ Track ၁၁။ Track ၁၂။ Track
September 17, 2009 mmsong ဘိုဘို အခွေ (အများ) စည်သူလွင် ရဲသွင် Media2Comments
စည်သူလွင် + ချောစုခင် – မေ့မရတဲ့ အချစ်များ
၁။ ငိုနေလား – စည်သူလွင် ၂။ မုသားချိုချို – ချောစုခင် ၃။ မေ့မရတဲ့ အချစ်များ – စည်သူလွင် + ချောစုခင် ၄။ သွေးထဲကချစ်သူ – စည်သူလွင် ၅။ အချစ်ပဲနားလည် – ချောစုခင် ၆။ ကိုယ့်ရင်မှာ – စည်သူလွင် ၇။ ရင်ကွဲသူ – ချောစုခင် ၈။ အမြဲချစ်နိုင်ပါစေ – စည်သူလွင် + ချောစုခင် ၉။ ခရစ္စမတ် ချစ်သူ – စည်သူလွင် ၁၀။ တို့ဝေးရင် – ချောစုခင်
September 15, 2009 Nge အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) စည်သူလွင် ချောစုခင် Myanmar Artist Leaveacomment
စည်သူလွင် – အကောင်းဆုံးတေးများ
၁. ငြိမ်းသတ်လိုက်သည် ၂. ဂန္တ၀င်သီချင်း ၃. သူငယ်ချင်း ၄. အတိတ်အိပ်မက် ၅. မျက်ဝန်း ၆. နေဝင်ချစ်သူ ၇. နယ်လွန်စိတ် ၈. ကိုယ့်ကြောင့် ၉. မင်းအကြောင်းအိပ်မက် ၁၀. ရှင်းပြခွင့် ၁၁. ဘယ်သူမှ ၁၂. တို့ဝေးပြီ
May 30, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စည်သူလွင် Myanmar Artist5Comments
၁. မျိုးကျော့မြိုင် – ထာဝရအမြဲ ၂. မျိုးကျော့မြိုင် – အတောင်ပံတွေ ၃. ဆောင်းဦးလှိုင် – ဘာမှားနေလဲ ၄. ဆောင်းဦးလှိုင်, ဇေယျာသော် – ဆန္ဒတွေကြောင့် ၅. ဆောင်းဦးလှိုင်, စည်သူလွင်, အဲလက်စ် – December ည ၆. ဆောင်းဦးလှိုင်, စည်သူလွင်, အဲလက်စ်, မျိုးကျော့မြိုင် – မိုးည ၇. အဲလက်စ် – အမှန်ကိုမမြင်သောနေ့ရက်များ ၈. အဲလက်စ် – မင်းစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် ၉. စည်သူလွင် – ရူးအောင်ချစ်တယ် ၁၀. စည်သူလွင် – အသည်းကွဲတဲ့ည + အဲလက်စ် – ငါမင်းကို ၁၁. Solo
May 30, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) အဲလက်စ် စည်သူလွင် ဆောင်းဦးလှိုင် မျိုးကျော့မြိုင် Myanmar Artist 1 Comment